FANANGANANA NY “TANAMASOANDRO” : Omena tombony ny orinasa malagasy
Omena tombony amin’ny fananganana ny “Tanamasoandro” ny Orinasa Malagasy. 4 octobre 2019
Vita sonia omaly ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny mpandrindra ny tetikasa Tanamasoandro sy ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharaha misehatra amin’ny asa vaventy. Nampahafantarina ireo orinasa malagasy handray anjara amin’ny fananganana ny Tanamasoandro nandritra io omaly io koa ny firafitry ny tanàna vaovao hatsangana.
Manana fahaiza-manao mahakasika izany ny Injerena sy manam-pahaizana malagasy, raha ny fanazavana. Tsiahivina fa ho hita ao amin’ity tanàna vaovao ity avokoa ny biraom-panjakana, indostria, toeram-pandraharahana vaovao, Oniversite, Building mora ho an’ny besinimaro sy ireo fotodrafitrasa hafa mamaly ny filan’ny mponina.
Efa nisy ny fifampiresahana teo amin’ny fanjakana sy ny mpandraharaha ary ireo mponina nampiasa ny tany hanorenana ny tanamasoandro, raha ny voalazan’ i Gérard Andriamanohisoa, mpanolotsaina manokan’ny Filohan’ny Repoblika. “Ny tanjontsika dia ny fijerena ny tombotsoan’ny Malagasy ao anatin’ny tetikasa, tsy hadinontsika koa fa isika dia miaraka amin’ireo mpisehatra sy mpandraharaha Malagasy amin’ny fanorenana ny tanamasoandro”, hoy ny fanazavany. Nohamafisiny koa omaly fa misokatra tanteraka ho an’ny mpandraharaha malagasy ny fanorenana rehetra atao, tsy amin’ny tetikasa tanamasoandro irery ihany fa amin’ireo asa vaventy tetikasan’ny fanjakana ihany koa.
Naneho ny fahavononany hiara-hiasa amin’ny fitondram-panjakana avy hatrany ireo sendikan’ny mpandraharaha misehatra amin’ny asa vaventy nandritra ny fihaonana teo amin’ny roa tonta. Nambaran’ireto farany fa azo tanterahina tsara ny tetikasa tanamasoandro satria efa nahazo famatsiam-bola fanampiana avy amin’ny AFD ny sekoly mampiofana amin’izany mba hamaly ny filana amin’ny fananganana ny tanamasoandro. “Tetikasa voavolavola tsara ny tetikasa tanamasoandro satria efa iaraha-mahita ny fahasahiranana eto Antananarivo, tery ny tanàna tsy hita intsony izay aleha” hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharaha misehatra eo amin’ny asa vaventy.